Ahoana ny fomba hanesorana ireo sary masina ao amin'ny bira fisehizan'ny Finder | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fomba hanesorana ireo sary masina ao amin'ny bira fisehizan'ny Finder
Mbola hiresaka aminao momba ny lafin-javatra iray indray izahay fa tena azo inoana fa mihoatra ny iray aminareo no tsy mahay manao azy. Ireto ny sary masina hita eo amin'ny ankavanan'ny birao. Raha vaovao na vaovao amin'ny macOS Sierra ianao dia tsy maintsy fantatrao fa ny Finder dia manana bara fisehon'ny eo an-tampon'ny birao izay misy ny sary masina toy ny WiFi, feo, sarimihetsika, fampandrenesana, kisary misy rindrambaiko napetraka sasany ary ao amin'ny macOS vaovao Sierra ny kisary Siri.
Ireto sary masina ireto no antony nanapahako hevitra hiresaka momba izany androany. Aorian'ny fametrahana ny macOS Sierra vaovao ho an'ny namana amin'ny Mac-ny ary hazavao amin'ny avo ny vaovaonaoIzy tenany ihany no nilaza tamiko fa tsy mila na inona na inona avy amin'i Siri ao amin'ny Mac-ny izy. Te hijanona tsy hahita ny sary famantarana ny Dock izy na ilay hita eo amin'ny zoro ambony an'ny Finder. EFA ny mpiara-miasa amintsika Jordi Jiménez dia niresaka tamintsika androany momba ny fomba fanesorana ny kisary Siri, fa izao kosa hamenoiko kely izany vaovao izany, extrapolating ny hetsika amin'ny fampiharana hafa.
Amin'ny fahatongavan'i macOS Sierra, Siri dia tonga amin'ny Mac ary inona ho an'ny sasany ny fahatongavana nandrasana hatry ny ela, ho an'ny sasany kosa dia fitaovana iray hafa izay tsy tian'izy ireo ampiasaina izao. Araka ny hitanao, rehefa apetrakao macOS Sierra dia apetrak'ilay rafitra ianao, mazava ho azy, kisary Siri iray na eo amin'ny Dock na eo amin'ny zoro ambony an'ny Finder. Toy izany koa no mitranga rehefa mametraka rindranasa toa ny CleanMyMac, Boom, na amin'ny teny fohy ianao, izay nanapa-kevitra ny mpamorona azy ireo fa hiseho ao amin'ny baran'ny menio Finder.
Eny, araka ny noheveriko mialoha, ny namako dia tsy maniry ireo sary masina eo amin'ny birao izay ilazany amiko fa fantany fa manala sary masina avy amin'ny Dock, tsindrio fotsiny dia sintomy amin'ny birao mandra-pisehoan'ny teny hoe mamafa. Na izany aza, ny tsy fantatro dia ny fanesorana ireo sary masina avy eo amin'ny bara ambony an'ny Finder. Ho an'ireo mpampiasa rehetra manontany an'io fanontaniana io dia tsotra be ny valiny. Ny zavatra voalohany tsy maintsy hataontsika dia ny mahita raha ao amin'ny Preferensi System dia misy fizarana ho an'io fitaovana na fitaovana io izay misy ny kisary ao amin'ny bara ambony ary raha izany dia ampidiro izy ary hamarinina raha misy safidy hanesorana ilay kisary. Raha ny marina, araka ny lazain'ny mpiara-miasa amintsika Jordi amintsika, raha miditra amin'ny System Preferences sy Siri isika, dia ho hitantsika fa manome antsika safidy hanala ilay kisary, fa amin'ny rindranasa hafa dia ao anaty menio milatsaka izy io izay miseho eo amin'ny kisary menio izay ahafahantsika manafina azy amin'ny bira fisio.
Raha fintinina, tsy misy fomba fanao mahazatra izay arahana mandrakariva amin'ny fanafenana ireo sary masina eo amin'ny bira fisakafoanana ary izany dia ny hoe ny mpamorona tsirairay dia mandahatra ny fampiharana azy amin'ny fomba hafa. Rehefa mandeha ny fotoana sy ny traikefa dia ho zatra mitady ny fomba hanafenana azy ireo amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Sierra » Ahoana ny fomba hanesorana ireo sary masina ao amin'ny bira fisehizan'ny Finder
Salama e. Manana olana aho taorian'ny nanatsahako ny macbook pro ho an'i Sierra. Nisy sary famantarana fampiharana nijanona teo amin'ny bara ambony ary rehefa apetrako eo amboniny ny làlambe dia miseho ny boribory avana ary tsy avelany hanao zavatra hafa aho. Hahafantatra fomba hafa hanafoanana azy ve ianao?
Izany no niovan'ny Apple tao anatin'ny 5 taona niaraka tamin'i Tim Cook teo an-tampony
Ity ny MobilePro, fanohanana kely izay hahafahanao hanana toerana bebe kokoa eo amin'ny latabatrao